निर्मला हत्याकाण्डमा नयाँ मोड : हिरासतमा लिइएका दिलिप, रोशनी र बबिता छुटे — Newskoseli
निर्मला हत्याकाण्डमा नयाँ मोड : हिरासतमा लिइएका दिलिप, रोशनी र बबिता छुटे
हत्यारा भनिएका दिलिप विष्टको डीएनए म्याच भएन
कञ्चनपुर, २६ भदौ ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरको भीमदत्तनगरपालिका– २ की १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लगाउने क्रममा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएका तीनै जना मंगलबार रिहा भएका छन् ।
प्रहरी हिरासतमा लिइएका दिलिप विष्ट र रोशनी बमलाई साधारण तारेखमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णराज ओझाले बताएका छन् । बबिता बमलाई भने ३० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाडिएको छ ।
‘बम दिदीबहिनीलाई उनका बुबाको जिम्मामा र दिलिपलाई उनका दाजुको जिम्मामा छाडेका छौं’- उनले भने । विष्टलाई दोषी ठहर गर्दै सार्वजनिक गरेपछि कञ्चनपुरमा मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिलाई दोषी देखाइएको भन्दै आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनका क्रममा १४ वर्षीय सनी खुनाको ज्यान समेत गएको थियो ।
विष्टको डीएनए समेत म्याच नभएपछि र अरु खासै प्रमाण नभेटिएकाले साधारण तारेखमा छाडिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी उपरीक्षक कुवेर कडायतले बताए । हत्याको अनुसन्धान जारी रहेको उनले बताएको सरकारी समाचार एजेन्सी राससले जनाएको छ ।
जेनेभामा नेपालको अडान : ‘विश्वभर मृत्युदण्ड अन्त्य हुनैपर्छ’
एकाबिहानै भूकम्प : ‘वार्षिकी’ कै अघिल्लो दिन ‘डरलाग्दा’ २ धक्का !
पूर्वमाओवादीबाट को–को बने सत्ताधारी नेकपाका अध्यक्ष ? (नामावलीसहित)
विरहीको खण्डन : ‘वार्ताका लागि विप्लवलाई दबाब दिइएको छैन’ (विज्ञप्तिसहित)
नर्सको आत्महत्या ! अस्पतालको शौचालयमै झुन्डिएर मृत फेला
फेरि ३ दिन देशभर मेघ गर्जन, चट्याङ, हावाहुरीसहित वर्षा !